UMPHAKATHI UBONGA UMASIPALA NGOKULUNGISWA KWAMANZI – Sivubela intuthuko Newspaper
Agcine elungisiwe amanzi abesexhaxhaze izinyanga ezintathu eNtuzuma
UMPHAKATHI waseNtuzuma esigcemeni sakwa H usuzwakalise enkulu injabulo emva kwezinyanga ezintathu behamba endleleni egxaza amanzi ngenxa yemitha lamanzi ebelivuza.
Ngokusho kwamalunga omphakathi lelimitha bese kunesikhathi livuza kanti akekho obephumela obala ngokuthi elakabani njengoba emaningi ndawonye. Bathi ukuvuza kwalamanzi bekunomthelela omubi njengoba ebevuzela endleleni yabahamba ngezinyawo nobekwenza ukuba kusheleleke kungahambeki kahle.
Emasontweni adlule uMasipala eTheku ukwazile ukuvala lapho kuvuza khona nobesekudala umonakalo nasezakhiweni zabantu abasondelene nalendlela yezinyawo.
“Lendlela yimbi vele ngokwayo kodwa ngoba bekunamanzi nje besisenkingeni ngoba bekusheleleka. Baningi abantu belimala kulendlela ukuvuza kwalamanzi kwenze isimo saba sibi kakhulu,” kusho uNksz Nonto Mnyandu.
UNksz Mnyandu uthi bekuba nzima kakhulu kuyena njengoba ubebuye aphume ebusuku emsebenzini ubezithuka esegxambuza emanzini.
Ukuvuza kwamanzi kulendawo sekwaba insakavukela njengoba imigwaqo eminingi ixhaxhaza amanzi kodwa lomphakathi uthi ubungathembi ukuthi lenkinga ingalungiseka njengoba izwe libhekene nokubhebhetheka kwegciwane lecorona.
“Siyazi sesiside impela isikhathi lokukuvuza kungalungiswa kodwa besingazitsheli ukuthi bangase bafike abakaMasipala esikhathini esinzima kangaka. Kuyasijabulisa thina esisebenzisa lendlela ukuthi uMasipala wethu uyasebenza nangalesikhathi,” kusho uNksz Mpume Sibiya.
Ngaphambi kokuqala kukathaqa ezweni iMeya yeTheku ukhansela Mxolisi Kaunda wamemezela ukuthi ukuletha benguMasipala bazoqhubeka ukuletha izidingo emphakathini.